महामारी झेलीरहेको भारतमा सुरु भयो अर्को विपत्ती, ६ जनाको मृत्यु-हजारौं विस्थापित – Sapana Sanjal
महामारीले जनता आ क्रा न्त परेकै बेला भारतमा फेरी अर्को विपत्ती आइलागेको छ । विपत्तीमा हजारौं नागरिक प्रभावित भएका छन् । अहिले सम्म विपत्तीमा परेर २ जनाको मृ,त्यु भएको पुष्टि भइसकेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । अरब सागरमा बनेको चक्रवातले भारतमा वि ध्वं स मच्चाउन थालेको हो । नागरिकहरुलाई त्यहाँको प्रशासनले सुरक्षित हुन आग्रह गरेको थियो । आज यसले अझ भयंकर रूप लिने खतरा बढेको त्यहाँका मौसमविद्ले अनुमान गरेका छन्।
यसको गति तीव्र बन्दै गएको र सोमबारसम्म प्रतिघण्टा १६० किलोमिटर हुन सक्ने मौसमविदको अनुमान छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार चक्रवात प्रभावित धेरै क्षेत्रमा अहिले तीव्र गतिमा आँधीसहित ठूलो वर्षा भइरहेको छ। केरलको एर्नाकुलम र कोझिकोड जिल्लामा आँधीका कारण २ जनाको मृ,त्युसमेत भइसकेको छ। २ हजार मानिस विस्थापित भएका छन्। केरल राज्यका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनले चक्रवातका कारण विद्युत् र कृषि क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान भएको बताएका छन्।
भारतीय मिडिया आजतकका अनुसार गोवामा अहिले चक्रपातको ठूलो प्रभाव परेको छ । कर्नाटनका ४ जनाको मृत्यु भएको छ । गाडीहरु वाढीमा तैरिएको देखिएका छन् । अहिले सम्म ७३ गाउँ यो चक्रपातवाट प्रभावित भएका छन् । ठूला ठूला रुख ढलेका छन् सडक अवरुद्ध भएको छ । हमन्त्री अमित शाहले आपतकालिन बैठक बोलाएका छन् । यसले पार्न सक्ने ठूलो प्रभाव आँकलन गरेर तयारी बैठक बोलाइएको हो । सुरज जिल्लाको ४० गाउँ र ओलपाड तहसिलको २५ गाउँलाई सतर्क रहन भनिएको छ । हजारौं नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ ।
Prevआफ्नै समाचार संस्थाको भवन इजराइलले उडाइदिएपछि बोले अमेरिका र कतार
Nextभारतमा तहल्का मच्चाउन सुरु गरेको चक्रपातको सोमवार देखि नेपालमा पनि यस्तो पर्छ असर
आमाको लास सडक छेउमा राखेर रुदै गरेका टुहुरा बच्चाहरु !! यदि तिमीमा प्रेम छ भने फोटो छुनुहोस् र R.I.P. लेख्नुहोस् !!
काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका शान्तिटोलमा १४ बर्षकी किशोरी मृत फेला